पाइलट विजय लामाको वाइडबडी सपना (भिडियाे) - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
'बोइङ उडाउनु म्यानेज एण्ड फ्लाइङ हो'
बबिता तामाङ असार ९
पाइलट विजय लामा
त्यो मेरो जीवनको बिर्सनै नसकिने क्षण हो’, उनी भन्छन्, ‘दुर्घटना नजिक पुगेको त्यो नै मेरा लागि पहिलो र अन्तिम क्षण पनि हो।'
पाइलट विजय लामा ट्विनटर जहाजमा जोमसोमबाट पोखराको उडान गर्दै थिए। जहाजभित्र करिब १८ यात्रु थिए। एक्कासि जहाजलाई कालो बादलले छोप्यो।
पाइलट लामाले खराब मौसमसँग जुझ्दै विमान अवतरण प्रयास गरे। तर त्यो सफल हुन सकेन। मौसममा एक्कासि आएको त्यो परिवर्तन देखेर को–पाइलट आत्तिए। यात्रुहरु चिच्याउन थाले।
१८ मिनेटको दूरीमा आइपुग्नु पर्ने पोखरा विमानस्थल १ घण्टासम्म खोज्दा पनि भेटिएन। तर लामाले अन्धाधुन्द विमान उडाइरहे। एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र चालकबीच सम्पर्क बिच्छेद भयो। कहाँ उडिरहेको भन्ने पनि पत्तो भएन। लामाको अन्धाधुन्द उडानबाट पोखरा पुग्नुपर्ने जहाज चितवन पुगेछ। उनले त्यहीँ भरतपुर विमानस्थलमा अवतरण गराउने प्रयास गरे।
२३ वर्ष अघिको सो घटना सम्झिँदै पाइलट लामा 'एक्साइटेड' हुन्छन्। हिमालले घेरिएको जोमसोमबाट १९ मिनेटको हवाई दुरीमा छ पोखरा विमास्थल। जोमसोमदेखि पोखराको हिमाली उडान जोखिमपूर्ण पनि छ। तर पाइलट विजय लामा हिमालको काखबाट उड्न पाउँदा रोमाञ्चित हुन्छन्।
‘त्यो मेरो जीवनको बिर्सनै नसकिने क्षण हो’, उनी भन्छन्, ‘दुर्घटना नजिक पुगेको त्यो नै मेरा लागि पहिलो र अन्तिम क्षण हो। अलिकति 'कमनसेन्स' र निरन्तर प्रयास नगरेको भए हामी जे पनि हुन सक्थ्यौं।’
पहिलाे पाइलट फिल्ममा
विजय लामाको जीवनमा दुईवटा बाटाहरु स्पष्ट देखिन्छन्। पहिलो, आकाशमा उड्ने पाइलट र दोस्रो पर्दामा देखिने कलाकार। पाइलट हुनुभन्दा पहिला उनी कलाकारै हुन्। सन् १९८१ मा बनेको चलचित्र आदर्श नारीमा विजय लामा पाइलटको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भयो। पाइलट पोशाकमा ठाँटिएर अभियनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्दा त्यहाँ उनले गजबको सम्मान पाए। अभिनय नै सही विजय लामालाई त्यो घटनाले पाइलटको ‘चार्म’ महसुस गरायो।
त्यसको केही समयपछि उच्च शिक्षा अध्ययनको तयारी गरिरहेका उनलाई पिताले सोधेका थिए। ‘अब के पढ्ने ?’ उनले तत्काल जवाफ दिए, ‘म त पाइलट बन्ने हो। त्यसकै अध्ययन गर्छु।’ यो सन् १९८४ को कुरा हो। पाइलट त पढ्ने तर कहाँ पढ्ने? कसरी पढ्ने? उनले छेउटुप्पो थाहा पाउन सकिरहेका थिएनन्। पाइलट विजय गिरीले उनलाई पाइलट पढ्न अमेरिका जाने बाटो देखाइदिए।
पाइलट बन्ने लक्षसहित काठमाडौंको एउटा ठिटो काठमाडौंबाट अमेरिकातर्फ उड्यो।
‘नयाँ ठाउँ घुम्ने र रमाइलो गर्नुपर्ने बानीले गर्दा बुवाले पढ्नका लागि भनेर पठाएको ६ हजार ५ सय डलर प्राइभेट पालटको लाइसेन्स लिनु अगाडि नै सकियो,’ विजय लामा अहिले सम्झिन्छन्, ‘किशोरावस्था भएर होला पैसा सकिएको थाहै पाइनँ।’
अन्तिममा बाँकी रह्यो ४ सय डलर र ४ सय ५५ डलर पर्ने गाडी। त्यो समयमा उनको अपार्टमेन्ट भाडा ४ सय ७५ डलर थियो। घरबाट पठाएको पैसा केही महिनामै सकियाे। अब के गर्ने ? उनीसँग दुइवटा विकल्प थिए। एक घरमा पैसा माग्ने, दाेस्राे अाफैैँ काम खाेज्ने। उनले दाेस्राे बाटाे राेजे।
भाँडा माझ्ने काम
‘म काम खोज्दै पिज्जाहट पुगेँ’, उनी ती दिन सम्झिन्छन्, ‘म्यानेजरले मेरो अन्तर्वार्ता गर्याे। मेरो अंग्रेजी देखेर काम पक्का भयो।’
ढुक्क भएर उनी ढोकाबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा म्यानेजरले एउटा प्रश्न फेरि सोध्यो ।
‘ग्रीनकार्ड त छ नि होइन ?’ विजय लामालाई ठूलो धर्मसंकट आइपर्याे। झुटो बोलेर जागिर खाउँ कि सत्य बोलेर अपमानित हौं !? उनले सत्यको पक्ष लिए। त्यसपछि म्यानेजर रिसले मुर्मिरियो। ‘मेरो समय बर्बाद गर्ने तँ को होस्? निक्लिहाल् भन्दै गाली गर्याे’, उनी सम्झन्छन्।
अभावको अत्यासले गाँजेको बेला हुन लागेको जागिर फुत्किएपछि उनको मनोबल कमजोर बन्यो। विमान चालक बन्ने सपना बोकेर अमेरिका पुगेका उनी निरास भए। पुरानो गाडी चढे र कोठा फर्किए। अब के गर्ने, कसो गर्ने उनको दिमागले केही सोच्नै सकिरहेको थिएन।
त्यही साँझ ल्यान्डलाइनमा फोनको रिङ बज्यो। भारी मन पार्दै उनले फोन उठाए। ‘तिमी २० मिनेटभित्र काममा आऊ’, उताबाट कसैले भन्यो। फोन उही पिज्जाहट म्यानेजरको थियो।
‘म १५ मिनेटमै पुगेँ’, लामा सम्झन्छन्।
पिज्जाहटमा काम गर्न सजिलो थिएन। उनले कडा मिहिनेत गरे। भाँडा मझुवा (डिसवासर) देखि सुरु भएको उनको पिज्जाहट करिअर वेट्रस र सुपरभाइजरसम्म पुग्यो। साथीहरु घरबाटै पैसा मगाउँथे। उनी आफ्नै कमाइले पढ्ने भए। कमर्सिएल, इन्सट्रुमेन्ट रेटिङ, मल्टि इन्जिन रेटिङको पढाई उनले आफ्नै पैसामा पूरा गरे।
हरेक पाइलटले तालिमका दौरान सोलो फ्लाइट गर्नुपर्छ। त्यस्तो सोलो फ्लाइट अवसर सामान्यत ३०–४० घण्टा उडान गरिसकेकाहरुलाई दिइन्छ। विजय लामाले यो अवसर ८ घन्टा उडाएपछि नै पाए। ‘सोलो फ्लाइट गर्दा विमान जुन धावनमार्ग उडान गरेको हो त्यही धावनमार्गमा अवतरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘तीन पटक विमान उडान र अवतरण गरेपछि निरीक्षण गरिरहेका इन्स्ट्रकटरलाई जहाजमा हालेर आउनुपर्ने हुन्छ। र विमान पार्किङ बेमा लगेर राख्नु पर्ने हुन्छ।’
सम्बन्धित खबर: ‘वाइड बडी’ जहाज उडानका लागि स्लट उपलब्ध गराउन निगमको माग
‘तर मैले विमान उडान गर्ने जोसमा इन्स्ट्रकटरलाई विमानमा राख्नै बिर्सिएँछु। तर उनी रिसाएनन्। मेरो जोश देखेर उल्टो खुशी भए।’
सन् १९८६ मा तालिम सकियो। उनी न्युयोर्क गए। ४ वर्ष काम गरे। तर अमेरिकाले उनलाई आकर्षित गर्न सकिरहेको थिएन। साथी केदार पहाडीले काठमाडाैंमा नेपाल वायु सेवा निगमको पाइलटका भ्याकेन्सीमा फर्म भरिदिएछन्। परीक्षा लेख्न उनी नेपाल फर्किए।
सन् १९८८ जुन १ देखि विजय लामाको करिअर सरकारी स्वामित्वको निगममा सुरु भयो। उनको पहिलो व्यवसायिक उडान काठमाडौं–लुक्लाको थियो। विजय लामाको पहिलो व्यवसायिक उडान इन्स्ट्रकटर पाइलट एएस राणासँग लुक्ला उडानमा सँगै थिए।
लुक्लाको सानो धावनमार्गमा ट्विनअटर विमान अवतरणपछि बाहिरिँदा स्थानीय बासिन्दा खादा, माला, टीका लिएर उपस्थित थिए। उनीहरु त्यहाँ कलाकार पाइलट विजय लामालाई स्वतगत गर्न पर्खिराखेका थिए।
‘इन्स्ट्रकटर पाइलटभन्दा मलाई बढी सम्मान गर्दा कताकता गारो लाग्यो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘तर गुरुले असहज मान्नु भएन।’ १६ वर्षको आन्तरिक उडानका दौरान उनी नेपालका तराई, पहाड, हिमाल पुगे। सबैतिर उनले उस्तै न्यानो माया पाए।
सम्बन्धित खबर: दुई महिना थन्किएको ‘सगरमाथा’ ले हङकङबाट उडान थाल्यो
पाइलट करिअरको १६ वर्षपछि उनको बोइङ उडान सुरुभयो। ९ वर्षसम्म आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तर्फ उडान गरे। आन्तरिक उडान पूर्ण रुपमा छोड्दा उनको पाइलट करिअर २५ वर्ष पुगेको थियो। त्यही अनुभवका कारण उनले ट्विनअटर प्रशिक्षक, आन्तरिक उडानको चिफ पाइलट, निगमको उप निर्देशक, डेजिकनेटेट चेक पाइलट, रिसोर्स म्यानेजमेक्ट इन्स्ट्रकटर पाइलटको भूमिकामा पाए।
पाइलट विजय लामा अर्का पाइलट सञ्जय वैद्यका साथ ककपिटमा
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक उडाउनुमा गर्व
उनको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको पहिलो गन्तव्य काठमाडौंबाट मुम्बईको थियो। हरेक पाइलटले पहिलो उडान इन्स्ट्रकटर पाइलटसँग गर्छन्। विजय लामाको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान इन्स्ट्रक्टर पाइलट आरपी श्रेष्ठसँग तय भएको थियो। ‘विजय लामाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दैछ भन्ने कुरा परिवार, साथीभाई सबैलाई थाहा थियो,’ उनी सम्झिन्छन् ‘तर अन्तिममा मैले उडान गर्न पाइनँ।’
जुन दिन पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान मिति निश्चित गरिएको थियो त्यो दिन इन्स्ट्रकर पाइलट श्रेष्ठ जापान पुगेछन्।
‘उडान गर्न नपाएपछि झोँक्किएर मैले निगमका महाप्रवन्धक सिजे शर्मासँग झगडै गरेँ’, उनी भन्छन्। केही दिन ढिलो गरी उनले काठमाडौंबाट दिल्लीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरे। ११ वर्षसम्म उनले निगमका बोइङ उडाए।
अब उनको यात्रा अमेरिकामा निर्मित बोइङबाट युरोपमा बनेको एयरबसतर्फ सोझिएको छ। सन् २०१५ देखि उनी एयबस ३२० जहाज उडाउँदै आएका छन्। निगमले यही असार महिनादेखि ब्रान्ड न्यू वाइडबडी एयरबस ३३० भित्र्याउँदैछ। लामा सो वाइडबडी उडाउन तालिम लिने प्रक्रियामा छन्। ‘ब्रान्ड न्यु वाइड बडी ३३० उडाउनु मेरो सपना हो’, उनी भन्छन्।
सम्बन्धित खबर: नेपाल अाइपुगे थप दुई चिनियाँ जहाज, पाइलट अभावले पार्किङमै रहने
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा कम्पनीको विमान उडाउन पाएकोमा उनी गर्व गर्छन्। तर निगमसँग उनका गुनासा पनि छन्। ‘नेपाली र विदेशी पाइलटले पाउने पारिश्रमिकमा धेरै भिन्नता छ,’ उनी भन्छन्, ‘काम एउटै हो। विदेशीभन्दा हामी केहीमा कम छैनौं। तर पारिश्रमिकमा विभेद छ।’ अस्थायी र करारमा काम गर्दै आएका पाइलटलाई समेत फरक हिसाबले पारिश्रमिक दिने गरेकोमा उनको गुनासो रहेछ।
‘पारिश्रमिकमा समानता नभए देश मात्र भनेर कति दिन बस्न सकिन्छ र?’ देशलाई आमा मान्ने पाइलट विजय लामाले भाबुक हुँदै सुनाए, ‘हामी देशका लागि भनेर विदेशीले दिएका अफरहरु रिजेक्ट गर्दै आएका छौं तर निगम भने नेपाली विमान चालकलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ।’
१९ सिनेट ट्विनअटरको तुलनामा बोइङ धेरै ठूलो विमान हो। १९० सिट क्षमताको बोइङमा टर्बो प्रान इन्जिन हुन्छ। ‘प्राविधक हिसाबले भन्नुपर्दा बोइङ उडाउनु भनेको म्यानेज एण्ड फ्लाइङ गर्नु हो’, उनी भन्छन्।
पाइलट पेशाको ३० वर्षे अनुभव सँगालेका लामाले पुरानो प्रविधिका ट्विटअनरदेखि पछिल्ला विमान पनि उडाएका छन्। के फरक भएको छ त ? ‘आधारभूत रुपमा सबै विमान उस्तै हुन् यदि अहिलेका जहाजबाट अटो मेसिन हटाउने हो भने’, उनी भन्छन्।
याे पनि : अन्नपूर्ण उड्न तयार
तस्विर तथा भिडियाे: प्रविन काेइराला
प्रकाशित ९ असार २०७५, शनिबार | 2018-06-23 18:54:26